သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားကျောင်း
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုမကြာခဏဖော်ပြသည် (ခ) ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်၊ တည်ရှိမှု၊ ဒီစိတ်ကိုဖော်ပြရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းလား?
သခင်ယေရှုကို ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အဖြစ် ဖော်ပြသည် (ဖိလိပ္ပိ 4,13(ဂလာတိ) ဘုရားသခင်ထံတော်ပါး၊ 2,20) ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် (ယော 5,19) ဘုရားသခင်ရဲ့ အသံတော် (ယော 3,34) သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့် ယေရှုအကြောင်းပြောကြသည်။
သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာများကို ရည်ညွှန်းပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသက်သက်ထက် ဝိညာဉ်တော်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလိုတော်ရှိသည် (1. ကောရိန္သု ၁2,11: "ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုတည်းသော စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီကို သူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်း ပေးအပ်ပါတယ်")။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ရှာဖွေ၊ သိရှိ၊ သွန်သင်ပေးကာ ခွဲခြားဆက်ဆံသည် (1. ကောရိန္သု 2,10-13) ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စိတ်ခံစားမှုများရှိသည်။ ကျေးဇူးတော်၏သဘောကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနိုင်သည်။ (ဟေဗြဲ၊ 10,29) ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြလော့။ (ဧဖက် 4,30) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နှစ်သိမ့်ပေးပြီး၊ ယေရှုကဲ့သို့ပင်၊ အထောက်အမဟုခေါ်သည် (ယော ၁4,16) အခြားကျမ်းပိုဒ်များတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဟောပြောသည်၊ အမိန့်ပေးသည်၊ သက်သေခံသည်၊ လိမ်ညာသည်၊ လှမ်းသည်၊ အားထုတ်သည်၊ စသဖြင့် ... ဤအသုံးအနှုန်းများအားလုံးသည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ညီညွတ်ပါသည်။
ကျမ်းစာအရဆိုလျှင်စိတ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်က "တစ်စုံတစ်ယောက်" မဟုတ်ဘဲ "တစ်ခုခု" ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအများစုတွင်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကို“ သူ” ဟုရည်ညွှန်းသည်။ ယင်းအစား၎င်းသည်စိတ်၏စရိုက်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတွက် မြင့်မြတ်သောအရည်အသွေးများကို ရည်ညွှန်းသည်။ သူသည် သဘာဝတွင် ကောင်းကင်တမန် သို့မဟုတ် လူသားအဖြစ် မဖော်ပြပါ။ အလုပ် ၃3,4 မှတ်ချက်များ– “ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့ကိုဖန်ဆင်း၍၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ထွက်သက်တော်သည် ငါ့ကို အသက်ပေးတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖန်ဆင်းသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ထာဝရဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ 9,14) အလုံးစုံ ပြည့်စုံတော်မူသည် (ဆာလံ ၁၃9,7).
ကျမ်းစာကိုလေ့လာပါ။ ဝိညာဉ်တော်သည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ။ အလုံးစုံသောအရာ၊ ဤအရာအားလုံးသည်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားအဖြစ်ဖော်ပြသည်။